Mpitsirikasa : mbola maro ireo tsy fanarahan-dalana eny anivon’ny toeram-piasana – Depeche TARATRA
Accueil/Social/Mpitsirikasa : mbola maro ireo tsy fanarahan-dalana eny anivon’ny toeram-piasana
Mpitsirikasa : mbola maro ireo tsy fanarahan-dalana eny anivon’ny toeram-piasana
Natacha Hasimbola il y a 1 semaine
Hapetraka manomboka izao ny fahaizana amam-panao ho an’ireo mpiantsehatra mivantana amin’ny olana ateraky ny asa. Tanjona ny hampirindra sy hijery manokana ny fomba fiasa amin’ny olana rehetra aterak’izany.
Ny mpitsirikasa no manao ny fanadiahadiana ifotony ary ny mpitsara kosa no mandray sy mitsara izay mety ho disadisa eo amin’izany sehatra izany. Fanamby hapetraka ny mba hisian’ny fitoviam-pijery. Ho tanterahina ao anatin’ity atrik’asa ity ny fandinihina manokana ireo izay mety ho fehezan-dalana famaizana eo amin’ny sehatry ny asa mba hialana amin’ny gaboraraka sy ny tsy fanarahan-dalàna misy.
Nanatanteraka fampihofanana ho an’ireo mpitsara sy mpitsirikasa eo anivon’ny Ministeran’ny Asa, ny Fampananan’Asa, ny Asam-panjakana ary ny Lalàna Sosialy ny Birao Iraisam-pirenena momba ny asa (BIT) eto Madagasikara mba hahatongavana amin’izany. Haharitra efatra 4 andro ity atrik’asa ity.
Mpangala-jaza iray no maty voatifitry ny Polisin'ny CSP Ihosy, zaza 6 sy 10 taona no tafaverina soamatsara.
Fanadinana Baccalauréat: 66 taona ny zokiny indrindra, 12 taona ny zandriny indrindra
ATSGC: fanomezan-danja ny fanatanjahan-tena sy ny lalao netim- paharazana aty Afrika
Gendarmerie Nationale: 9 596 candidats sont inscrits au concours d’entrée de la 76e promotion
Travail décent à Madagascar : il faut réorienter les interventions pour atteindre les objectifs
SATO “Safe toilet”: éradiquer le défécation à l’air libre
Nohavaozina tanteraka ny tranon’ny RNM sy TVM ao Betroka
L’insécurité alimentaire dans le sud a augmentée de 238% cette année